Megestrol (မဂ်ဂျက်စ်စထရောလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Megestrol (မဂ်ဂျက်စ်စထရောလ်)
Megestrol (မဂ်ဂျက်စ်စထရောလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Megestrol (မဂ်ဂျက်စ်စထရောလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး၊ ချွေးတိတ်ဆေးများနှင့် သင့်ကျန်းမာရေး
Body Lotion ရွေးတော့မယ်ဆိုရင်